I-china pp ibhokisi lokukhangisa elingenalutho lomkhiqizi nomhlinzeki | Sihai
Ibhokisi le-ESD lokuthengwa kwemali elifana nelinye lifana nebhokisi lokuthengwa kukathayela eline-pp, futhi line-non-toxic, ayinambitheki, ubufakazi bomswakama, ukumelana nokugqwala, isisindo esincane, esiqinile, esiqinile, ukubukeka okuhle, umbala ocebile, okumsulwa, okuvuselelwa kabusha, ukuvikelwa kwemvelo , akukho ukungcola nezinye izici.
Kk ibhokisi lokuboniswa lukathayela nebhokisi likathayela, liyinto efanayo futhi likhiqizwa nge-pp ishidi elingenalutho, i-diecut eyenziwe ngokwezifiso nokuphrinta ngesicelo esihlukile, ishidi likathayela elingenziwa lingenziwa i-silkscreen, ukuphrinta kwe-UV, unamathisele umbala wephepha lokuphrinta kanye nesitika sokunamathela, bese egcizelele eyenziwe noma iyiphi i-shpae nosayizi, isetshenziswa kakhulu ekubonisweni kwemikhiqizo, ekukhangiseni, esitolo, ekukhangiseni nakwabanye okukhangisa.
Ibhokisi lokuboniswa lukathayela liyinto eyenziwe ngephepha elingenalutho, linezinzuzo ezifanayo, linamanzi, liqinile, alinabo ubuthi, alinambitheki, linobufakazi bomswakama, ukumelana nokugqwala, isisindo esincane, ukusetshenziswa kabusha kwemvelo, ukubukeka kombala oyisicaba nezinye izici .
Ibhokisi lesikhangiso lesicelo esingenalutho lesicelo:
Kk ibhokisi lokuboniswa lukathayela lisetshenziswa kakhulu ezimbonini eziningi, inzuzo yokupakisha yomkhiqizo wezimboni, izikhwama nezikhwama zezikhwama, imboni yamabhodlela, imboni yemishini, umkhakha wokukhangisa, umhlobiso wasekhaya, imboni yefenisha, ezolimo, imikhiqizo yamasiko nezemidlalo, imboni yezimoto, imboni yemishini kagesi, izimpahla zezingane, izipho, imboni yobucwebe kanye nezinye zikhombisa izikhangiso.
Langaphambilini pp ibhodi lokukhangisa likathayela
Olandelayo: pp ibhokisi lokhetho eliyize